Maxkameynta iyo Dacwadii askarigii Dilay George Floyd. Derek Chauvin, oo la qaadi doono saacadaha soo socda. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Maxkameynta iyo Dacwadii askarigii Dilay George Floyd. Derek Chauvin, oo la qaadi...
Maxkameynta iyo Dacwadii askarigii Dilay George Floyd. Derek Chauvin, oo la qaadi doono saacadaha soo socda.
Waxaa dalka Mareykanka ka socdo diyaargowga maxkameynta Derek Chauvin, oo ah askeriga lagu eedeeyay dilka ninka madowga ahaa e aan hubeysnyn George Floyd.
Dilkii uu askari boolis caddaanka ah gaystay waxay sababtay iney gobollada Mareykanka oo dhan ay ruuxaan muddaharaadyo rabshada wata iyo dibadbaxyo ka dhacay meelo badna oo caalamka ah.
Previous articleMadaxweyne ku xigeenka Jubbaland, Maxamuud Sayid Aadan oo dib ugu laabtay Kismaayo, kadib safar uu ku tegay Nairobi
Next articleQaraxyo waawayn oo ka dhacay xarunta ganacsiga ee Equatorial Guinea,ee Bata
HostMonster Hosting is a web hosting company with 20 years of progressive experience in computer technology. It works well with most CMS, especially it...
Madaxweynihii hore ee Koofur Afrika oo aan dooneyn in xabsi la...
Heshiiskii Doorashada Somaliya oo la saxiixay
War deg deg ah: Qarax uu ka badbaaday taliyaha qeybta Booliska...